ကြာဖြူ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကြာဖြူ (Nymphaea alba) ကို ဥရောပတိုက် ရေကြာပန်းဖြူ (european white water lily)၊ ရေနှင်းဆီဖြူ (white water rose) စသည်ဖြင့် ခေါ်ဆိုပြီး၊ ရေနေပန်းပွင့်ပင် တမျိုး ဖြစ်ကာ နင်ဖီယာစီးမျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ မြောက်အာဖရိက၊ သမအာရှ၊ ဥရောပနှင့် အပူပိုင်းအာရှ(အိန္ဒိယ)တို့တွင် အလေ့ကျ ဖြစ်ထွန်းသည်။ 
၎င်းကြာဖြူသည် ၃၀-၁၅၀ စင်တီမီတာ (၁၂-၅၉ လက်မ) နက်သော ရေတွင် ကြီးထွားပြီး၊ ရေကန်ကြီးများ၊ အိုင်ကြီးများကို နှစ်သက်သည်။
အရွက်သည် အချင်းအားဖြင့် ၃၀ စင်တီမီတာ (၁၂ လက်မ) အထိ ရှိနိုင်ပြီး၊ တပင်လျှင် ၁၅၀ စင်တီမီတာ (၅၉ လက်မ) ပြန့်ကားသည်။ ပန်းပွင့်များသည် အဖြူရောင် ဖြစ်ပြီး၊ အထဲတွင် ဝတ်ဆံဖို(တိုင်) ငယ်များစွာ ရှိသည်။ 
ပထမဦးစွာ စာအုပ်ထဲတွင် ရေးသား ဖော်ပြခြင်း ခံရသည်မှာ ၁၇၅၃ ၌ ကားလ် လင်းနရပ် ရေးသော သူ့စာအုပ် ဖြစ်သည့် Species Plantarum ၏စာမျက်နှာ ၅၁၀ တွင် ဖြစ်သည်။ အနီမျိုးသည် ၁၉ ရာစု အစောပိုင်းတွင် ၎င်းတို့ကို စတင်တွေ့ရှိရာ ဆွီဒင်၊ တီဗဒင်တောအုပ်အတွင်းရှိ ဖဂါတန်း ကန်၌ များပြားစွာ သဘာဝအလျောက် ပေါက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ တွေ့ရှိမှုကြောင့် ပန်းကို ရှာဖွေသူ များပြားလာရာ၊ အကာအကွယ် မပေးနိုင်မီ ၎င်းကြာဖြူသည် အရိုင်းဘဝမှာပင် မျိုးတုံးလုနီးပါး ဖြစ်သွားသည်။
↑ NatureServe (2013). "Nymphaea alba". IUCN Red List of Threatened Species 2013. IUCN. old-form url
↑ Nymphaea alba L. is an accepted name။ theplantlist.org (23 March 2012)။
↑ Taxon: Nymphaea alba L.။ 23 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Vit näckros (in Swedish)။ Swedish Museum of Natural History (1996)။ 18 August 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Härstammar Claude Monets röda näckrosor från Fagertärn i Närke?" (in Swedish) (2005). Svensk Botanisk Tidskrift (99:3–4): 146–153. Retrieved on 18 August 2015. Archived4March 2016 at the Wayback Machine.
ဤ အပင် ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကြာဖြူ&oldid=711179" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။